Taariikhda My Butros » 3 Talooyin in aad samayso Chick kaamilka Magnet!
Last updated: badda. 28 2020 | 2 min akhri
Waxaa jira nin oo samayn Waxba, laakiin weli aakhirka helitaanka badan ay dhab xamili karaan dareenka badan ee dumarka. Waxaa jira kuwo kale oo aad u isku daya wax kasta oo suurta gal inuu yahay nin gabadh ee, laakiin halgan si ay u soo jiitaan xitaa hal haween oo. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin loogu talagalay ragga ka tirsan qaybta labaad; socda raacdid iyaga ka caawin doonaa in ay fahmaan waxa ay dhab ahaan ay raggu sameeyn waa in ay magnet ubad ah.
Baro sida loo sameeyo xiriirka indhaha
Haddii aadan magnet ah ubad dabiiciga ah, ma waxaad filan kartaa inaad aragto labada ciyaaryahan kasta oo indhaha aad socda. Sidaas, marka aad soo gashid qolka ka buuxaan koox dad ah, waa inaad marka hore u dhexaadka ah si aad u ogaato dareenka dabiiciga ah inta ay le'eg tahay bilowga ah inaad helayso.
Ha isku dayin in la sameeyo wax ka gubanayn in ay la wareegaan kuwa kale’ dareenka; xasuuso in aad halkan u taaganahay in quful damac la haween jiidasho leh oo aan u tagto sida saxda ah. Sida aad qolka baarida, waa in aad hesho ugu yaraan hal xisbi soo bandhigeysa xiisaha aad ee; haddii aad aragto iyada oo kor u sunnayaasha iyo dhoola aad ugu, jawaabaan dhoola oo isku day in aad iyada gaari ay leeyihiin nooc ka mid ah isgaadhsiinta.
Ma yaabban aad waxa haddii aadan soo gaarto qof dareysa aad u fiiriyey dhoola aad ama? Taasi waa mid aan dhici karin haddii aad u tagto a scan cabbiran gaabis ah. Haweenka intooda ugu badan (gaar ahaan kuwa ku hesho dad horey u jooga caajis qolka) sii eegaya dabiicadda si aad u ogaato in ninkii kaliya soo galay qolka waa istaahilaa ku filan; sidaa, scan si aayar ah u ogolaan doontaa in aad eegtid indhaha ugu yaraan mid ka mid ah.
Waxaa Hel, ha u siin
Tan waxaa iyo tijaabiyey oo hab; qabayaashii dilay marwada ee dunida ugu weyn u qaban oo aad hesho natiijo weyn. Si aad u heshid dareenka dumar ah, waxaad u baahan doontaa si aad u barato inaad is ilowsiisid. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad qof dumar ah ugu soo jiidashada badan ee koox ka mid ah afar ama shan si ay u muujiyaan xiiso aad ee, kaliya socon kooxda, waxana uu la hadlo dhammaan gabdhaha ka mid ah ay aad rabto in aad soo jiidan marka laga reebo.
Haweenka, sida aan loo eegin soo jiidasho ama kalsooni ku qabta inay yihiin, kaliya neceb yahay in la iska indho tiray. Marka eber dareenka ka dhigan tahay waxay bilaabi doonaan inay wax ku guuleysato in aad qadarin.
Diyaar u ahow inaad weydiiso su'aalo
Marka aad la kulanto qof dumar ah oo ah markii ugu horeysay, halkii hadlaya adiga kugu saabsan, su'aalo u waydiiyo. Haweenka eegin da'diisa, background tacliinta iyo xirfad kaliya jecel hadlaya naftooda ku saabsan. Sidaas, waxay jecel yihiin xaqiiqda ah marka ay ku kulmaan qof ay dhegeyste fiican; birlabta ubad sida caadiga ah waa dhagaystayaasha ugu fiican adduunka.
Weydii ku saabsan hiwaayadaha iyada, riyada iyada, iyo noloshiisa oo dhan; ayay kula hadli doono, hadal iyo hadal. Hubi in aad u dhagaystaan ​​wax alla wixii ay ka hadashaa si taxadar leh maadaama ay noqon karto wax laga xishoodo haddii ay hoorsato soo jeedin ah oo aan aad ka bixin karto sidii aad run ahaantii ma iyada oo dhageysaneysa.
Tilmaamaha kor show in ay u noqon magnet ubad mid loo baahan yahay in wax badan qaban ka badan kaliya raadinaya iyo ur wanaagsan. Si aad u hesho guys dareenka dumar ah waa in marka hore ay leeyihiin shaqsiyaad ah sasabasho; dhamaan tayooyinka kale oo soo socda yimaadaan.